Amụma mbido ebilitela nke Skywalker na -ebibi nwamba na ọfịs igbe - Pop Omenala
Amụma mbido ebilitela nke Skywalker na -ebibi nwamba n'ụlọ ọrụ igbe (emelitere)
Emelitere 12/20, 6:03 mgbede ET: Ahịa Fraịde etiti na -eme atụmatụ iwepụta nde $ 195 nde maka Bilie nke Skywalker , dabere na Ọdịiche .
Lee akụkọ mbụ n'okpuru .
Dị ka atụmatụ ndị mbụ si dị, Agha Star: Nbili nke Skywalker agaghị enwe nsogbu na -anọpụ iche ụdị ihe nkiri a Nwamba mgbe ọ na-abịa ire ahịa tiketi US, mgbe ọnụọgụ ndị ahụ mechara bụrụ nke gọọmentị mgbe ngwụcha ngwụcha afọ ga-agwụ n'izu ụka a. Rịba ama na nke a na -emekwa izu ụka mmeghe maka ihe nkiri abụọ ahụ.
amanda bynes shes the man eserese
Onye nta akụkọ Hollywood na-ekwu na ọrụ nsuso ahụ, agbanyeghị na ejighị n'aka, nwere mmechi nke trilogy Bilie nke Skywalker A na -atụ anya iwebata ihe dị n'etiti $ 175 na $ 200 nde. Banyere ụlọ ọrụ ego ya dị n'ahịrị ebe a, Disney, a na-ekwu na ha na-eji nlezianya na-atụ anya ọnụọgụ nde $ 160-gbakwunyere, mana n'ụzọ ọ bụla ha nwere onwe ha afọ helluva.
N'ihe gbasara ịsọ mpi megide onwe ya (karịa ihe ọ bụla Nwamba bụ) mkpokọta atụmanya maka Agha Star ' onyinye kachasị ọhụrụ ga -etinye ya n'okpuru mgbasa ozi Ikpeazụ Jedi , nke chebere $ 220 nde na mpụta mbụ ya na 2017, yana ndekọ izizi nke Ike na -eteta , nke jidere $ 248 nde na 2015.
IX IX ọ nkedo mejupụtara ngwakọta Agha Star ndị na -eme ihe nkiri ochie na ndị ọhụrụ, gụnyere John Boyega, Daisy Ridley, na Adam Driver, yana Billy Dee Williams, na Mark Hamill, na onye nwụrụ anwụ Carrie Fisher.
kedu oge netflix na -ewepụta ihe nkiri
Maka mmeghachi omume mbụ, Skywalker ugbu a na -ejide nke abụọ kacha ala Tomato Rotten ọkwa fim iteghete itoolu n'ime usoro ogologo afọ anọ gbakwunyere, yana akara ngụkọta pasent 59 na-ebute ya n'ihu naanị 1999 Akụkụ nke M: Ihe egwu Phantom (Pasent 53).
Maka Nwamba , nke ọma, nyocha ndị ahụ adịchaghị mma, dị ka ọ dị ugbu a 17 percent etinyela ya n'etiti ụdị ihe nkiri Broadway gosipụtara na 1998 ọ dabere na (pasent 20), yana Mike Myers dịka Dr. Seuss ' Cat na okpu (Pasent 9), opekata mpe n'ihe gbasara sinima metụtara nwamba.
tinye m ego n'èzí ebe ọ nọ ugbu a
THR na -agbakwụnye na Nwamba mere mkpagharị n'ike site n'ịghọ 'eserese ihe omume mbụ' nke nwere obi ike imeghe megide oge a Agha Star . Onu ogugu onyonyo na-atụ anya na ihe nkiri a ga-adọta n'etiti $ 14-17 nde n'oge ngwụcha izu mmeghe ha. Ha gara n'ihu kwuo na nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu mbibi dịka ọ na -ada ma e jiri ya tụnyere mmefu ego ihe nkiri nde $ 95, dịka ha dere 'Afọ abụọ gara aga, Onye Ngosi Kasị Ukwuu debuted na $ 8.8 nde karịa ekeresimesi ka ọ na -aga ị nweta nde $ 174.3 n'ụlọ.
N'ọnọdụ nke ọ bụla, ihe nkedo nke Nwamba juputara na nnukwu aha, ma eleghị anya ọ ga-enye gị naanị ohere iji lee ha n'ụdị nwamba nwere ụkwụ abụọ. Ihe nkedo a nwere mkpụrụedemede: James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Sir Ian McKellen, Taylor Swift na Rebel Wilson.
N'aka nke ọzọ ị nwere ikelee egwuregwugaa hụ Jumanji.
bụ achicha lava dịchaghị eghe eghe
kedu ka isi kwenye nwunye gi inwe uzo 3
ụgbọ elu 1 obere uwe mens
esi icho mma achicha agbamakwụkwọ na ọhụrụ okooko osisi
esi mee ka achicha gị ooh na N'ụbọchị nke abụọ